Abazali banovalo ngebhasi "eligcwala kuze kweqe" - Ilanga News
Home Izindaba Abazali banovalo ngebhasi “eligcwala kuze kweqe”
Abazali banovalo ngebhasi “eligcwala kuze kweqe”
Kuthiwa abafundi bashiye izikole ngasemakubo
INGEBHE kubazali babafundi baseMnyakanya High School, KwaNxamalala, eNkandla abasebenzisa ibhasi okuthiwa ligcwala ngendlela exakile ngenxa yokufuduka kwabafundi okuthiwa bashiye izikole eziningi eziseduze nabo kule ndawo. Ngokuthola kweLANGA, izikole okubalwa kuzona iBhamu, iMagqama, iNqumizwe, iMthungweni neKing Cetshwayo, zehlelwe yisibalo sabafundi njengoba sebegcwele eMnyakanya. Leli bhasi kuthiwa lihamba emzileni elilayisha kuwona ngisho nabafundi basezikoleni zamabanga aphansi, ezakhelene neMnyakanya High School.
Usihlalo wesigungu esilawula isikole uMnyakanya, uMnu Sibongiseni Bhengu, uthi lolu daba sebelubike kaningi emnyangweni wezemfundo. Uthi ngesonto eledlule, kwakuhlangene abazali kuxoxwa lona. “Abahloli bathi kufanele abantwana bafunde ezikoleni eziseduze nabo, bazikhethele bona ukuya eMnyakanya. Le nto iyasixaka ngoba akekho umzali ofuna ukufundisa ingane yakhe esikoleni esingenzi kahle. Isho ukuthi izingane zincishwa ilungelo lazo lokuzikhethela,” kusho UMnu Bhengu.
Utshele ILANGA ukuthi ibhasi liphelela eMnyakanya, kanti lifika khona lisasele nabafundi abangaphezulu kuka-100 njengoba abanye basuke sebesale kwezinye izikole. Uthi phakathi kwezinto ezidonsa abafundi bakwezinye izikole eMnyakanyaka, wukuthi kunemikhakha eminingi okubalwa owakwaHumanities, iCommerce nePhysical Science. Omunye wabazali ocele ukuba ligodlwe igama lakhe, uthi izingane zabo kaziphephile. “Uma leli bhasi lingaginqika, ziyofa zonke izingane ngendlela eligcwala ngayo. Kayikho ingane efuna ukusala ebhasini ihambe ngezinyawo. Yimbi lento eyenziwa ezemfundo, kusho ukuthi kufanele kuze kuphume izidumbu kufe izingane zethu besebeletha elinye ibhasi,” kusho lo mzali.
Ngokuthola kweLANGA, iMnyakanya ibidume ngezimpi zabafundi eminyakeni edlule, yehlelwa yizinga. Abazali bazikhipha izingane zabo, isikole sasala nembijana yabafundi. Kuthiwa ngoLwezi (November) ku-2020, kwafika uthishanhloko omusha, izinto zashintsha. Kulo nyaka isikole siphase ngo-86.3% umatikuletsheni. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe bazosebenzisana nehhovisi lesifunda kulolu daba. Uthe ngokukamgcinimafa kuzwelonke, iKwaZulu-Natal kayinayo kahle imali. “Umqondisi wesifunda eKing Cetshwayo uzongenelela ngokushesha ngoba impilo yabantwana ibalulekile,” kusho UMnu Mthethwa.
Previous articleKumnyama ngekusasa lomdlali weChiefs
Next articleUmbango womzila ukhiphe izidumbu